Meizu ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကပြောကြားရာတွင် Meizu 16 သည်ဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်းသို့မဟုတ်သြဂုတ်လအစောပိုင်းတွင်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည် Androidsis
ယခု, Meizu 16 သည်ကုမ္ပဏီ၏မျှော်မှန်းထားသည့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်ထို့အပြင်အဆုံးမဲ့ကောလာဟလများနှင့်ထင်မြင်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူများဖြစ်သည့်ကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Jack Wong ထံမှညွန်ကြားချက်များနှင့်အတည်ပြုချက်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရပြီးယနေ့ခေတ်တွင်ဤထင်ရှားသောသင်္ဘောနှစ်စင်းရောက်ရှိလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ သူသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အသိုင်းအဝိုင်းဖိုရမ်မှတဆင့်သူမပြုလုပ်ခဲ့ဖူးသောထူးခြားသောနည်းလမ်းဖြင့်မကြာသေးမီကမှတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့သည့်အခြားသတင်းများ၌လည်းသူကပြောကြားခဲ့သည်။ Meizu X8 သည် Xiaomi Mi 8 SE ထက်ပိုကောင်းလိမ့်မည်.
ဒီထုတ်ဖော်မီဂျက် ၀ မ်ကဤဆိပ်ကမ်းများကိုသြဂုတ်လ ၂၆ ရက်မတိုင်မီဝယ်ယူနိုင်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည် စမတ်ဖုန်းများ၏ဈေးနှုန်းသည်ယွမ် ၄၀၀၀ (ယူရို ၅၁၅ ခန့်) ထက်မကျော်လွန်နိုင်ကြောင်းယခင်ကအတည်ပြုခဲ့သည်။ ပို၍ ခက်ခဲသောအချက်မှာသူက၎င်းတို့အားဤလနှောင်းပိုင်းသို့မဟုတ်နောက်လဆန်းပိုင်းတွင်တရားဝင်တင်ဆက်သွားမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
မကြာသေးမီကသူလည်းအတည်ပြုခဲ့သည် လာမည့် Meizu 16 တွင် 3.5mm Jack နားကြပ်ပေါက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလိမ့်မည်။ မကြာသေးမီကပေါက်ကြားခဲ့သော Meizu 16 ၏ပုံရိပ်ကနောက်ကင်မရာကိုဒေါင်လိုက်ပုံထားသည့်ကင်မရာအာရုံခံကိရိယာနှစ်ခုဖြင့်ထိပ်ဆုံးအလယ်နေရာတွင်ထားရမည်ဟုဖော်ပြသည်။
ထွက်ပေါ်လာတဲ့စမတ်ဖုန်းပုံရိပ်တွေမှာ၊ fingerprint sensor ကမမြင်နိုင်ဘူး၊ ခန့်မှန်းထားသည်အတိုင်းဖုန်းတွင်လက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာပါရှိသည်။ Meizu 16 ၏မျိုးကွဲများထဲမှတစ်ခုသည် Qualcomm ၏ Snapdragon 845 နှင့်ဖုန်းတွင် 8GB RAM အထိပါရှိကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။
ဓာတ်ပုံအပိုင်းနှင့်ပတ်သက်။ , လွန်ခဲ့သောယိုစိမ့်မှုကဖုန်းများကို 12 megapixel + 20 megapixel resolution တပ်ဆင်ထားပြီးနောက်ကင်မရာတပ်ဆင်ထားသည်။။ သို့သော်နောက်ထပ်ယိုစိမ့်မှုတစ်ခုက dual-camera setup ကို Meizu 16 တွင်သာရရှိနိုင်ပြီး Meizu 16 Plus သည် 12-megapixel + 12-megapixel + 20-megapixel သုံးဆကင်မရာစနစ်တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။ ဖုန်းနှစ်မျိုးလုံးတွင် 20-megapixel ရှေ့အာရုံခံကိရိယာရှိသည်ဟုကောလာဟလသတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်.
ကြောင်းနှင့်အတူ Meizu X8 ကိုလည်းကုမ္ပဏီကဖြန့်ချိမည်, ထို Processor ကို - မောင်းနှင်ဖြစ်ဟုဆိုသည် Octa-core Snapdragon 710 မကြာသေးမီက Qualcomm မှထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Meizu ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကပြောကြားရာတွင် Meizu 16 သည်ဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်းသို့မဟုတ်သြဂုတ်လအစောပိုင်းတွင်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်
Navbar Weather ဖြင့်သင်၏ Android mobile ၏ navigation bar မှရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်ကိုရယူပါ